Bayi 13 otitshala abaphulukene nemisebenzi yabo eMpuma Koloni – Grocott's Mail
You are at:Home»Uncategorized»Bayi 13 otitshala abaphulukene nemisebenzi yabo eMpuma Koloni
Bayi 13 otitshala abaphulukene nemisebenzi yabo eMpuma Koloni
By _Gr0cCc0Tts_ January 14, 2013 No Comments3 Mins Read
Isikolo saseRhini nesihleli sishota ngootitshala sizibalela njengesinentlahla nanjengokuba esinye isikolo esikwafana naso kweliphondo leMpuma Koloni linyanzelwe ukuba likhulule otitshala abangapaya kweshumi elinambini kuleveki.
Uninzi lwabantwana eAlphendale High School, eMonti, bayakufika ngomso sele kungekho mntu wakubafundisa. Otitshala bathe bafumana ezindaba zathusayo ngexesha bengena emsebenzini wabo ngoMvulo.
Ngotitshala abalishumi elinesithathu nabebehlawulwa yi bhodi elawulayo yesisikolo abathe baxelelwa ukuba iphelile imali yokubahlawula. Abanye ke babengamaxhoba wesebe lezemfundo ephondweni emva kwisindululo esitsha nesithi mabanqunyanyiswe otitshala bexeshana.
Ibhodi elawulayo yesikolo iMary Waters High School ibisesinye sezikolo ebesifake isimangalo senkundla kuJuly ka 2012 ngakumphathiswa wemfundo esisiseko uAngie Motshekga. Elityala, nelixoxwe kwinkundla ephakamileyo eRhini, ibililinge lokunyanzela umphathiswa lo ukuba ade asebenzise umgaqo onguwo kuqesho lootitshala nowaziwa ngokuba yi “2012 education establishment.”
Kwisigwebo sakhe sangomhla wesi 3 ku Agasti, ijaji uClive Plasket uthe wayalela isebe lezemfundo ukuba libe lizivalile izithuba zootitshala ngomhla wesibini kuNovemba ka 2012. Logama zingekavalwa ezizithuba zititshala abasisigxina, isebe lanyanzelwa yinkundla ukuba libenootitshala bethutyana ukusuka ngomhla wesi 2 kuSeptemba.
Ukanti ijaji yaphinda kwakho yagqiba kwelithi isebe eli, kufuneka kwakho lihlawule abatitshala kudala bengahlawulwa ze libuyisele izikolo imali ekade zihlawulwa aba titshala bebengafumani mali yabo. Isebe alikwazanga ukwenza nomnye umyalelo kulemiyalelo yenkundla sithetha nje.
Esinye sezizathu esenza imeko ibemaxongo ngakumbi kwisikolo sebanga eliphakamileyo, I Alphendale, kukuba abazali basityala esi sikolo isixa mali esikwi 1.6 yezigidi zerandi zeschool fund engahlawulwanga. Inkqununu yesisikolo uClive Prince uxelele eliphephandaba ngesigqibo sokunqumamisa abatitshala balishumi elinesithathu.
“Ngenxa yokunqongophala kwemali asisakwazi konke-konke ukubahlawula”, uhlomle watsho uPrince izolo. “Abanye botitshala bexeshana isivumelwano sengqesho nabo siphele ngoDesemba kunyaka ophelileyo – kodwa ndibabone bengena emsebenzini namhlanje. Ndiye ndanyanzeleka ke ukuba ndilikhuphe litsole elithi asoze sikwazi ukubahlawula ngaphandle kokuba bebezakusincedisa nje ngaphandle kwentlawulo de sifumane ootitshala abasisigxina.”
UPrince uthi akakafumani mpendulo kwimbalelwano abeyithumelele isebe lezemfundo lephondo kunyaka ophelileyo.
“Bendixelela endisebenza nabo kusasa nje ukuba andiqinisekanga ukuba isikolo sizakuqhubeka kulonyaka. Ndinotitshala abebekwikhefu lwabakhubazekileyo okwethutyana iminyaka isibhozo ngoku kwaye basekuluhlu lwabantu abahlawulwa sithi…ndilixelele ke isebe nangalowo umba kodwa andafumana mpendulo”, waleke ngelitshoyo uPrince.
“Sinomhlangano emva komhlangano kodwa akukho sisombululo siphumayo. Sihleli singenanobhala iminyaka emihlanu ngoku kwaye kunyanzeleke ukuba ndenze lomsebenzi ngokwam.”
Malunga nesixa mali esi se 1.6 sizigidi zerandi, uPrince uthi uyixelele ibhodi elawulayo yesikolo kwaye umba lo bazakuwudlulisela kumagosa ahambe eqokeleka kwabo batyalayo.
Kwakwimeko ekwafana nale, kunyaka ophelileyo iMary Waters ibe idinga malunga neshumi elinanye lootitshala. Usihlalo we bhodi elawulayo uErrol Goliath basithoba abantu asele benondliwano ndlebe kunye nabo kwaye nasele bepasisiwe lisebe lezemfundo.
Previous ArticleBefore Edgar was Deadgar
Next Article Port Alfred home burgled